Cunto-qabteyntu waxay bixisaa Talooyinka Sarre-ga ee Sawirada
Google iyo mashiinnada kale ee raadinta waxay ku xiran yihiin sawir gacmeed sawir gacmeed bogga
si aad u qaadato nuxurka iyo muujinta goobaha. Shirkadaha, barnaamijyada, iyo horumariyayaashu waxay isticmaalaan gurguurada kala duwan iyo qalab yaraynaya si ay u gutaan shaqadooda. Haddii aad rabto inaad ganacsigaaga kor u qaado, waa inaad ka qaadataa macluumaadka laga helo goobaha firfircoon iyada oo la soo saarey xog lagu kalsoonaan karo. Soo dejinta. io iyo Kimono Labs waa ikhtiyaar wanaagsan - candy bars progressive slot machine. Iyada oo qalabkan, waxaad xoqin kartaa sawirada si sax ah. ContentBomb waa mid ka mid ah sawirada ugu caansan uguna fiican ee internetka. Qaababka ugu kala duwan ayaa lagu soo koobay hoosta.
1. Waxay caawisaa shabakadaha internetka iyo blogs:
Haddii aad dhawaan samaysay blog ama bog oo aad rabto inaad ku muujisid boggaga internetka, ContentBomb waa xulasho sax ah. Si ka duwan sida qalabka kale ee caadiga ah ee burburinta, waxay xajisaa sawiradaada waxayna ka dhigaysaa habka taranka si sahlan oo dhakhso badan. Waxaad wanaajin kartaa darajooyinkaaga mashiinka raadinta oo si joogto ah ula socon kara tayada sawirrada leh ContentBomb.
2. Si fudud ujirta macluumaadka lacagaha ah:
Iyada oo ContentBomb, waxaad si sahlan uga jari kartaa macluumaadka qiimaha bogagga internetka. Intaa waxaa dheer, waxaad ka koobi kartaa sawirrada bogagga shabakadaha, goobaha wax iibsiga, goobaha dib u eegista, iyo shabakadaha kale ee la midka ah. ContentBomb ayaa sidoo kale soo saari doona xogta laga soo qaatay sawirada la rabo waxayna isbarbar dhigi doonaan sicirka alaabooyinka kala duwan, taas oo sahlaysa shaqadaada. Qaybta ugu fiican waa in qalabkan uusan wax ka beddelin macluumaadka qiimaha, waxaadna helaysaa natiijooyin la isku halayn karo oo sax ah. ContentBomb waa wax fiican in la isbarbardhigo goobo kala duwan oo kaydiyo macluumaadka ku jira xogta gaarka ah.
3. Wax kasta xoqaya oo raadso qaabab la jecelyahay:
ContentBomb waxaa loogu talagalay in lagu xoqo nooc kasta oo xog ah, sida sawirrada, qoraalka, dukumintiyada PDF iyo faylasha HTML. Marka xogta si buuxda loo soo saaro, waxaad ku keydsan kartaa qaababka CSV ama JSON ama si toos ah ugu soo dhawow dariiqa adag ee loogu talagalay isticmaalka offline.
4. Ujeedooyinka shabakado badan oo online ah:
ContentBomb waxay beegsan kartaa tusmooyinka internetka, RSS iyo ATOM quudinta, bogagga wararka, goobaha safarka (sida Trivago iyo ceelasha), goobaha e-ganacsiga (Amazon iyo eBay) iyo shabakadaha kale ee la midka ah. Waxay tilmaami doontaa sawirrada faa'iido leh waxayna xoqin doonaan xogta iyada oo ku saleysan shuruudahaaga. Waxay sidoo kale bartilmaameedsanaysaa internetka iyo dib u eegista boggaga, helitaanka natiijooyinka suuragal ah isla markiiba. Waxay si sahlan u xoqin kartaa nuxurada laga helo faylasha JPG iyo PNG.
5. Macluumaadka tayada daabacan ee goobtaada si toos ah:
Iyada oo ContentBomb, waxaad daabacan kartaa tayada tayada si toos ah oona uuna u baahneyn in aad qaab kale uqalanto mar labaad iyo mar kale. Marka la soo dejiyo oo la hawl-galiyo, qalabkan ayaa jadwalkaaga ku qori doona isla markaana wuxuu badbaadin doonaa waqtigaaga ilaa xad. Waxaad sidoo kale ka dooran kartaa mawduucyada iyo mawduucyada si aad u siiso goobtaada muuqaal cajiib ah oo xirfad leh.
6. Dhammaan sifooyinka caadiga ah:
ContentBomb ayaa ugu fiican ee loo yaqaano 'Modules BotBomb' waxayna kuu fududeyneysaa inaad ku soo celiso habab kala duwan. Iyada oo qalabkan, waxaad abuuri kartaa maktabadaha sawirada, upload videos, faylasha fiidiyowga, iyo la wadaagno content mar kasta, meel kasta. Waxa kale oo ay soo saartaa xogta laga helo goobaha warbaahinta bulshada waxayna ku haboon tahay dhammaan nidaamka hawlgalka iyo shabakadaha internetka. Waxaad si sahal ah u abuuri kartaa hawlaha udubdhexaad u dirida iyo horumarinta xiriirka gudaha iyo dibaddaba adeeggan.